Uncategorized @zu – MBC
စက်တင်ဘာ 5, 2018
အသင်းချုပ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး၏ ဇူလိုင်လ သာသနာခရီးစဉ်
မြန်မာနိုင်ငံ နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန် အသင်းချုပ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးသည် အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ Green Lake, Wisconsin တွင် ၂၀၁၈-ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၄-၈)ရက် အထိ၊ အမေရိကန်နှစ်ခြင်း အသင်းတော်များအဖွဲ့(American Baptist Churches ABC) ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ပြုလုပ်သော ညီလာခံ (World Mission Conference)ကို တက်ရောက် […]
IMBF EC meeting
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြန်မာနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်မိတ်သဟာယ အမှုဆောင်အဖွဲ့အစည်းအဝေး(International Myanmar Baptist Fellowship- IMBF EC meeting)ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၁၉-၂၁)ရက်အထိ အသင်းချုပ် အထူးအစည်းအဝေးခန်းတွင် ပြုလုပ်ရာ ဥက္ကဌ သိက္ခာတော်ရဒေါက်တာထန်ကျင့်လျန်၊ ဒုဥက္ကဌ သိက္ခာတော်ရ ဒေါက်တာလတ်ယေရှဲ၊ အတွင်းရေးမှူး သိက္ခာတော်ရဆရာနိုင်ထွန်းသန်း နှင့် Rev. ဦးမျိုးမော်၊ Rev. Dr. […]
မတ် 13, 2019
မြန်မာနိုင်ငံ ဓမ္မတက္ကသိုလ် MIT ၏ဘွဲ့နှင်းသဘင်
မြန်မာနိုင်ငံ ဓမ္မတက္ကသိုလ် MIT ၏ဘွဲ့နှင်းသဘင်ပေးအပ်ခြင်း အခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၉)ရက်နေ့ နံနက် (၉း၀၀) နာရီမှ (၁၁း၃၀)နာရီအထိ အင်းစိန်ကျမ်းစာကျမ်း ကုန်းရှိ ဖူးသာဖြူခန်းမတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ သဘာပတိအဖြစ် ဆရာမ အေးမင်းမင်းဦး၊ အထူးဆုတောင်းခြင်းကို Rev. Dr. Molly T. Marshall […]
မတ် 21, 2019
သခင်ယေရှု ကားတင် အသတ်ခံရအပြီး၊ (၃)ရက်မြောက်နေ့တွင် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဆိုင်ရာ ဆင်ယင် ကျင်းပ ဝတ်ပြုသည်ကို “ အီစတာ” ဟုခေါ်သည်။ ဤသို့ဖြစ်မည်ကို ကြိုတင်ပြောကြားဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သည်ကို ဟေရှာယအနာဂတ္တိကျမ်းတွင် တွေ့မြင်နိုင် သည်။ “ ထိုသူသည် ငါတို့ လွန်ကျူးခြင်း အပြစ်များကြောင့် နာကျင်စွာ ထိုးခြင်း၊ နှိပ်စက်ခြင်းကို ခံရလေ၏။ ငါတို့၏ငြိမ်သက်ခြင်း […]